သင်းကွဲ ငှက်တစ်ကောင်၏ ၀ပ်ကျင်း
Monday, July 16, 2007 at 1:01 PM | 15 comments
ဒီဘလောက် လေးကို တကူးတက လာရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ ညီအကို မောင်နှမ အားလုံးကို ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ ကြိုဆိုပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ တတ်အားသမျှလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်လို့ ဒီဘလောက်လေးတွေကို လုပ်ခဲ့တာပါ။ အမှားအယွင်းများကိုတော့ နားလည်စွာနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးကြပါလို့ အနူးအညွှတ် တောင်းပန်ပါရစေ။ ဒီဘလောက်ဟာ မိန်းဘလောက် ဖြစ်ပြီး လင့်များမှ တဆင့် မိမိတို့စိတ်ဝင်စားရာကို ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ် ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်တို့ အဓိက တင်ပြလိုတာကတော့ မော်တာဒီဇိုင်း၊ အနာလက်ဆစ် နဲ့ အီးပီ ပိုင်းဆိုင်ရာများ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ လာရောက်ကြည့်ရှုလှည့်ပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ ခင်ဗျား။
ကျွန်တော့်ကို တစ်ခုခု မှာခဲ့ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာ မှာခဲ့လို့ရပါတယ်။ လိပ်စာလဲ ထားခဲ့ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by ဘလူးဖီးနစ်
Russian - Myanmar Dictionary Group
Ru-Mm - Recent changes [en]
ဖတ်စရာ မှတ်စရာ မြန်ပြည်အတွက် အင်ဂျင်နီယာ မော်တာဒီဇိုင်း စာကြည့်တိုက် ဓါတ်ပုံများ ကိုမိုးရေ အီလက်ထရောနစ် MyMetroWorld မဟန-ရူပဗေဒ ကိုဘုရင့်နောင် အကိုးအကားများ (EN) အကိုးအကားများ (RU) Electrical Engineering Tour
bluephoenix: ဘလူးဖီးနစ်, . All Rights Reserved. 2007 Myanmar Hyper Generation. All rights reserved. မြန်မာပြည်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများ and မော်တာဒီဇိုင်း